Ugbo ala (2) orylọ ọrụ - China Ngwa igwe (2) Ndị na-emepụta ya, ndị na-enye ya
Ihe nchacha (1)
Igwe ala (2)
Agụụ Cleaner (3)
Kapetị Cleaner (4)
Ikuku ikuku (5)
Boarddọ Aka ná Ntị
Nkume Mmezi Clean Systerm
Grainte polishing gị n'ụlọnga
Nkume marble polishing
Polishing ntụ ntụ
SC-1500 Ọsọ ọsọ ọsọ Burnisher
Rlọ Mkpebi Igwe SC-004
BD2AE-Ulo ohuru ohuru
BD1AE Rlọ Mmegharia Ngwa
BD3A Multi-ọrụ Brushin ...
Multi-ọtọ n'ala igwe-SC002
Igwe akụrụngwa na-arụ ọtụtụ ọrụ dị mfe ịrụ ọrụ, nchekwa na mmetụta nhicha dị mma
Ọ kachasị mma maka ihicha kapeeti, ala, ịgba ọsọ ọsọ dị ala maka ụdị ala dị iche iche na ịghagharị elu okwute maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ nri, ụlọ ọrụ ọfịs na ụlọ ngosi ngosi.
Multi-ọrụ Brushing igwe BD1A
Igwe nhicha bụ igwe dị mkpa iji kpochapụ ala siri ike, ọ bụ igwe dị ala (154rpm), mgbe ala gị nwere ahịhịa dị n'ime ala nke ịchọrọ itinye ụfọdụ ahụ ike na-etechasị, jiri ezigbo nhicha ihe, na-agba ahịhịa ahụ hichaa ala gị. The multifunctional brushing igwe ndị mfe iji rụọ ọrụ, mma ma magburu onwe ihicha mmetụta. Ọ kachasị mma maka ihicha kapeeti, ala, ịgba ọsọ ọsọ dị ala maka ụdị ala dị iche iche na ịghagharị elu okwute maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ nri, ụlọ ọrụ ọfịs na ụlọ ngosi ngosi.
Multi-ọrụ Brushing igwe BD2A
Ọ bụ multifunctional ntuziaka ukpụhọde ahụ na-enye ohere a kemfe na mfe ọrụ.
Ejiri igbe gia, okpukpu okpukpu abuo na ike di elu nke na eme ka igwe di nchebe ma di ike.
BD3A Multi-ọrụ Brushing igwe
Na ijikọ ọrụ nke nhicha ihe nhicha ala, enwere ike iji ya mee ihe maka iti mkpu ma ọ bụ imegharị nkume ahụ, nke kwesịrị ekwesị maka osisi, ụlọ, ụlọ nkwari akụ na ụlọ ahịa. O kacha adabara ụlọ ọrụ nhicha iji mee nlekọta kwa ụbọchị na ọgwụgwọ pụrụ iche na nkume ahụ.
A na-eme AC monopole asynchronous motor site na mbubata silicon-nchara nke akpọrọ akpọrọ
akwa nke akwa di elu, ya mere o nwere ike di elu, idi ala na okpomoku. A na-eji ihe nkedo eji eme ihe na-eme ka ihe ndozi weghachite site na nkedo nke ihe di elu iji belata mkpọtụ na ihe ndi ozo nke a na-esite na POM nwere oke mma.
O nwere ọdịdị mara mma na nke ejiji ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ.
Mgbe ịme waksị maka ime ka elu ụlọ dị ọcha na-enwu dị ka enyo.
Ezubere ya maka polishing ala nke ụdị okwute niile dị ọsọ ọsọ bụ 1500 rpm igwe ahụ agbachiri.